Ma wareejin karaa liisanka hal kombiyuutar oo waxaan u wareejin karaa mid kale? - DataNumen
Haddii aad iibsato hal shati oo halbeeg ah, markaa MA wareejin kartid ruqsadda hal kombiyuutar oo waxaad u wareejineysaa mid kale, haddii aan kombiyuutarkii hore waligiis mustaqbalka dambe la isticmaali doonin (waa laga tagi doonaa).
Haddii aad iibsato rukhsad farsamo yaqaan, markaa waxaad ruqsadda uga wareejin kartaa hal kombiyuutar una gudbin kartaa mid kale si xor ah. Fadlan nala soo xiriir haddii aad rabto inaad iibsato shatiga noocaas ah.
ruqsada, liisanka farsamada, liisanka wareejinta
Immisa kombiyuutar ayaan ku rakibi karaa alaabtaada?Sidee ruqsad looga joojiyaa?